Torolàlana ho an'ny mpivarotra momba ny fananana ara-tsaina (IP) | Martech Zone
Torolàlana ho an'ny mpivarotra momba ny fananana ara-tsaina (IP)
Alahady Oktobra 11, 2020 Sabotsy, Oktobra 10, 2020 Larizza de Vera
Ny marketing dia asa mitohy. Na orinasa orinasa ianao na orinasa kely, ny marketing dia fomba iray lehibe hitazonana ny orinasam-pandraharahana ary koa manampy amin'ny fitondrana ny orinasa mankany amin'ny fahombiazana. Zava-dehibe ny fiarovana sy ny fitazonana ny lazan'ny marikao mba hametrahana malama fanentanana amin'ny marketing ho an'ny orinasanao.
Saingy alohan'ny hamoahana fampielezan-kevitra ara-barotra stratejika, ny mpivarotra dia mila mahatsapa tanteraka ny sanda ary koa ny fetran'ny marika. Ny olona sasany dia manadino ny lanjan'ny zon'ny fananana ara-tsaina amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo marketing. Noho ny fahafantarana tsara fa ny zon'ny fananana ara-tsaina dia afaka manome fototra lehibe ho an'ny marika na vokatra iray, dia niresaka momba ny sasany amin'ireo tombony azony ary koa ireo tombony ananany.
Ny fananana ara-tsaina no tombotsoanao amin'ny fifaninanana
Ny zon'ny fananana ara-tsaina toy ny fiarovana ny patanty sy ny mari-barotra dia ahafahan'ny mpivarotra mampiditra mora foana ny vokariny amin'ny besinimaro.
Ireo mpivarotra dia efa manana ny iray-up raha misy patanty ny vokatra. Koa satria ny fiarovana ny patanty dia manome ny zon'ny orinasa hanala vokatra mitovy amin'izany eny an-tsena, dia mahatonga ny asan'ny mpivarotra ho sarotra kokoa izany. Afaka mifantoka amin'ny famoahana an paikady marketing mahomby amin'ny fomba fampidirana ny vokariny eny an-tsena, ary aza manahy ny amin'ny fihoarana na famonoana ireo mpifaninana aminy.
Ny fiarovana ny mari-pamantarana, etsy ankilany, dia manohana sy manome fototra ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing. Izy io dia manome zon'ny orinasa hiavaka amin'ny logo, anarana, teny filamatra, famolavolana sns. Ny trademark dia miaro ny lazany sy ny sarin'ny marikao amin'ny alàlan'ny fisorohana ny hafa tsy hitrandraka ara-barotra ny marikao. Ny marika dia mety ho mpanondro hahafantaran'ny mpanjifa ny vokatrao eny an-tsena. Amin'ny alàlan'ny fiarovana ny mari-pamantarana, azonao antoka fa na inona na inona fampielezana na paikady ataonao, ny vahoaka dia mahazo hafatra mifanaraka amin'ny kalitaon'ny vokatrao eny an-tsena.
Ohatra, ny mpanamboatra bateria iray tany am-boalohany dia tsy voatery ho tompon'andraikitra amin'ny bateria nanahaka nipoaka. Na izany aza, mety tsy ho fantatry ny mpanjifa fa nanahaka ny batery satria hita eo amin'ny vokatra ny sary famantarana anao. Raha vao manana traikefa ratsy amin'ny mpanjifa ny mpanjifa dia hisy fiantraikany amin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo izany ary mety hitodika any amin'ny marika hafa izy ireo raha hisolo ny fomba hafa. Ka tsy mandeha intsony fa ny fiarovana ny patanty sy ny mari-pamantarana dia iray amin'ireo singa ilaina amin'ny fampielezan-kevitra mahomby.
Mikaroha fananana ara-tsaina an'ireo mpifaninana aminao
Tokony ho fantatry ny mpivarotra fa ny orinasa dia tokony hanao fikarohana momba ny patanty na marika famantarana alohan'ny hametrahana fangatahana patanty na mari-pamantarana any amin'ny United States Patent and Trademark Office (USPTO). Mandritra io dingana io dia mila ampidirina ny mpivarotra satria ny valin'ny fikarohana patanty na mari-pamantarana dia mety hanome fampahalalana manan-danja izay azo ampiasaina hamoronana drafitra marketing mahomby. Ny fampahalalana ampahibemaso momba ny fananana ara-tsaina dia fitaovana ara-barotra mahomby ampiasaina mba hamantarana ireo mpifaninana mety hitranga.
Satria ny fangatahana patanty dia matetika apetrak'ireo orinasam-barotra, azonao atao ny mikaroka mora foana ireo orinasa mamokatra vokatra mifandraika na mitovy aminao. Raha manao izany ianao dia ho afaka hahafantatra ny mety sy fetran'ny vokatrao eny an-tsena alohan'ny hanombohanao hanao fampielezana ho azy.
Ny fananana fahatakarana ny fomba fanaovana fikarohana momba ny patanty dia tena ilaina amin'ny marketing amin'ny asa aman-draharaha koa. Afaka mamantatra orinasa na orinasa afaka mandray soa amin'ny vokatrao ianao. Ohatra, raha ao anaty orinasa mamokatra mikraoskaopy elektronika ianao dia afaka mitady orinasa hafa mifandraika amin'izany sehatry ny hetsika izany.
Ny valin'ny fikarohana patanty matihanina ampiarahina amin'ny hevitra ara-dalàna avy amin'ny mpisolovava iray momba ny patanty dia izay ilain'ny mpamorona sy mpandraharaha / mpandraharaha tsirairay avy (ary mahatakatra tsara) alohan'ny handrosoana amin'ny famoronana azy ireo.
JD Houvener an'ny Patanty sahisahy
Fisorohana ny fanenjehana IP
Zava-dehibe ny fahalalana ny sasany amin'ny fototra lalànan'ny fananana ara-tsaina alohan'ny hamarotana ny vokatrao amin'ny tanjona ara-barotra. Raha manao izany ianao, dia ho afaka hisoroka ny fihemorana eo amin'ny orinasa sy ny fanenjehana lafo vidy mifandraika amin'ny fandikan-dalàna.
Mikasika ny zon'ny mpamorona, ny ankamaroan'ny mpivarotra dia efa nahafantatra ny tady sy ny haben'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona raha ny momba ny fitaovam-barotra. Ny fampiasana sary, horonan-tsary, rakipeo, mozika, sns izay Google fotsiny na tadiavinao amin'ny motera fikarohana hafa dia mety hampidi-doza ny orinasanao. Noho izany, tsy maintsy ataonao izay hahazoana antoka fa tsy misy zon'ny mpamorona ny sanganasa famoronana ampiasainao amin'ny fitaovanao ara-barotra na avelan'ny mpamorona / mpanoratra ny sanganasa hampiasa azy io amin'ny tanjona ara-barotra. Amin'izany dia azonao atao ny misoroka ny fanenjehana sy ny sarany lafo amin'ny fampanoavana.
Raha ny momba ny patanty na ny mari-pamantarana, ny fahafantarana ny fizahana ankapobeny amin'ny fizotrany dia afaka manampy ny mpivarotra hisoroka ny fanitsakitsahana lalàna. Satria mety ho somary sarotra ny fizotry ny fampiharana sy ny fikojakojana, mazàna ny tompona orinasa dia manakarama marika famantarana mpisolovava momba ny patanty hanampy azy ireo miaraka. Amin'izany fanamarihana izany, ny mpivarotra toa anao dia mila mirotsaka an-tsehatra sy mahatadidy an'ity dingana ity mba hahafahanao manana tetika marketing tsara kokoa izay tsy hampidi-doza ny orinasanao.
Mamandraha hevitra amin'ny Internet
Tags: ip sahyCopyrightfandikana ny zon'ny mpamoronafananana ara-tsainazon'ny fananana ara-tsainalalàna ipJD HouvenerJD Houvenerlalànaara-dalànapatantyfanitsakitsahana ny patantyfamantarana
Larizza dia mpanoratra tsy miankina monina any Filipina. Nanoratra lahatsoratra maromaro tao amin'ny gazety Asian Journal izy, ary vao haingana izy no niara-niasa tamin'ny orinasa iray momba ny lalàna momba ny fananana ara-tsaina izay manana foibe any Singapore ary mikasa ny hanao asa ho an'ny lalàna IP amin'ny ho avy.
Fitantanana ny fiainana an-tsokosoko Conga: manatsara ny fahombiazan'ny varotra amin'ny alàlan'ny automatisation d'exploitation
Ireo antony 5 nahatongavan'ny mpitsidika iray tamin'ny pejinao